जापानमा भयावह बन्दै 'सेक्स संकट'
scheduleबुधवार आषाढ़ २ गते, २०७८
जापानमा भयावह बन्दै ‘सेक्स संकट’
के जापानमा ‘सेक्स संकट’ले भयावह रुप लिइरहेको छ ? के एक दिन जापान खाली हुने दिन पनि आउला ? जापानी नागरिकले ‘बढी यौन सम्पर्क’ गर्न आवश्यक छ किन भनिँदै आइएको छ ? तोहोकु युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले यही निष्कर्षपछि डुम्जडे क्लोक (प्रलय हुने दिनको अनुमान) गरेका छन् ।
उक्त शोधको निष्कर्षका अनुसार जापानमा वर्तमान ‘सेक्स संकट’ विद्यमान रहे १६ अगस्त ३७६६ मा केवल एकजना मानिस मात्र बाँकी रहनेछन् । यो अनुमान देशमा घट्दो प्रजनन दर र वृद्धवृद्धाहरुको जनसंख्यामाथि आधारित छ । बेलायतमा पनि १९२० को दशकको पुस्ताका तुलनामा लाखौं मानिसहरुमा यौन सम्पर्कसम्बन्धी रुचिमा घट्दै गइरहेको छ । तर जापानमा भने अवस्था साँच्चिकै भयावह छ ।
जापान फ्यामिली प्लानिंग एसोशियसनको सर्वेमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर भएका ४५ प्रतिशत महिलाहरु यौन सम्पर्कमा कुनै चासो राख्दैनन् । एक तिहाईभन्दा बढी पुरुष पनि यो कुरामा सहमत छन् ।
तोहोकु युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुका अनुसार स्थिति एकदमै गम्भीर छ । शोधकर्ताहरुका अनुसार जापानमा यस्तो अवस्था पनि आउनेछ जतिबेला जापान बिलकुल एक्लो हुनेछ किनकी त्यतिबेला जापानमा केवल एकजना मात्र मानिस बाँकी हुनेछन् ।
ब्रिटेनमा पनि यौन सम्पर्कलाई बढावा दिनको लागि डेटिंग एप्सको शुरुवात गरिएको छ । यद्यपि बेलायती युवाहरु कम शारीरिक सम्पर्क गरिरहेका छन् । सेक्समा कमी आउनुको एक महत्वपूर्ण कारण इन्टरनेटमा समय बढी बिताउनु हो ।
जापानीहरु काममा पनि बढी समय खर्च गर्छन् । काममा उनीहरु यति थाक्छन् कि उनीहरुको लागि शारीरिक सम्पर्क कम प्राथमिकतामा पर्दछ । औसत जापानी पुरुषहरु एक हप्तामा ८० घन्टा काम गर्दछन् ।
धेरैजसो जापानी महिलाहरु करिअर र गृहस्थीको बीचमा एउटा चुन्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्दछन् र यसमा धेरैको प्राथमिकता परिवार बसाउनु वा बिबाह गरेर घरगृहस्थी सुरु गर्नु हुँदैन ।
यदि कसैले युवाहरुलाई सेक्स, ड्रग्स र रक ज्यादा आकर्षित गर्ने विषय हुन् भन्छन् भने यो जापानी युवाहरुको हकमा साँचो होइन ।
बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
जीवन शैली, यौन जीवन
‘मैले मानिसको यौन जीवन सुधार्न सक्छु भन्ने थाहा पाउँँदा निकै खुशी लाग्छ’
यौन क्षमता बढाउन त्याग्नुहोस् यी बानीहरु
एकदमै अनौठा छन् यी देशमा सेक्ससम्बन्धी कानून, पढेर हुनुहुनेछ हैरान
धेरे महिलाहरुलाई किन कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन
ओछ्यानमा के चाहन्छिन् महिला ?
यौन जीवन, विज्ञान / प्रविधि
लामो दूरीको सम्भोगका लागि ब्लुटुथ र एपबाट नियन्त्रण हुन्छन् यी उत्कृष्ट पाँच सेक्स टोय
के सेक्स मेसिनले आत्मियता प्रतिस्थापन गर्ला ?
यौन सम्पर्कअघि यी ५ कुरा भुलेर पनि नगरौं
चुम्बन स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक
लकडाउनबीच बढ्दैछ सेक्स टोयको बजार
कोरोनाको समयमा यौन सम्बन्ध बनाउन कति ठिक
यसकारण सम्भोगका लागि उत्तम महिना हो डिसेम्बर
अण्डाले यौन क्षमता बढ्छ ?
यौन क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
सम्भोगमा लामो समय टिक्न पुरुषका लागि केही टिप्सहरु
अब बिर्सिदिनोस् यौनसम्बन्धी २७ भ्रम
३० वर्ष जेठा हाकिमसँगको ‘अफेयर’ले अदालत पुर्‍यायो
नयाँ दिल्ली, १ असार । उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन आउँन ९ महिना मात्र बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको राजनीति...
निर्वाचन आयोगको फैसला लज्जास्पद र भर्त्सनायोग्य छः नेता श्रेष्ठ
काठमाडौं, १ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका...
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रवक्ता शर्माको मर्मस्पर्शी पत्र
काठमाडौं, १ असार । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गण्डकी प्रदेशमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र...
मातृभूमि छाडेर नयाँ मुलुकमा बस्ने धनी व्यक्तिमध्ये चिनियाँ र भारतीय धेरै
एजेन्सी, १ आषाढ । जन्मभूि छोडेर नयाँ मुलुकमा गएर बस्ने धनी मानिसमध्ये चिनियाँ र भारतीयहरुको संख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै...
वीरेन्द्रनगर, १ असार । नेकपा एमालेको चाहनाविपरित कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले...
फाइल फोटो कर्णाली, १ असार । कर्णाली प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत...
बुद्ध, बुद्धत्व र आधुनिक समाज
गौतम बुद्धको नाममा सबै नेपालीले गौरवबोध गर्दछन् । यसमा कुनै विवाद छैन । तर बुद्ध को हुन् ? बुद्धत्व के हो ? यस सम्बन्धमा भने...
काठमाडौं, १ असार । शीर्षकको कथनलाई एकैछिन थाती राख्दै रत्नाकरबारे संक्षिप्त बयान गरौँ । जंगलमा बसोबास गर्ने भिल जातिको परिवारमा...